Komiti yeparamende inoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende, yePublic Accounts, neMuvhuro yakashora mutevedzeri wagavhuna weReserve Bank, VaKhupukile Mlambo, nevamwe vakuru vakuru vebhanga iri mushure mekunge vatadza kuenda kudare kuti vapindure mibvunzo ine chekuita nekusafambiswa zvakanaka kwemari muchirongwa cheCommand Agriculture.
VaMlambo nevamwe vavo havana kuudza komiti iyi chikonzero chakavatadzisa kuenda kunopa humbowo.
Sachigaro wekomiti iyi, VaTendai Biti, vanoti VaMlambo ndivo vange vachifanira kutungamira chikwata cheRBZ sezvo mukuru webhanga iri, VaJohn Mangudya, vakazivisa kuti vainge vasingakwanise kumira pamberi payo sezvo vanenge vari kuWashington DC nebasa.
VaBiti vayambira VaMlambo kuti vanogona kusungwa nekuzvidza dare reparamende uye vainge vavatumira masamanisi.
Vati pane mamiriyoni emadhora emari yekuAmerica asina kushandiswa zvine mwero kana kutsakatika uye ibasa rekomiti yavo kuongorora kuti mari dzehurumende dzinoshandiswa sei.
Hatina kukwanisa kutaura naVaMlambo kuti tinzwe kuti sei vasina kuenda kuparamende nhasi sezvo mbozhanhare yavo yange yakadzimwa.
VaBiti vatiwo vakuru vakuru mubazi rezvemari vanosanganisira, VaZvinechimwe Churu, VaFidelis Ngororo, Accountant-General nevamwe vachamira pamberi pekomiti yavo svondo rinoouya apo vari kuenderera mberi nekuongorora mashandisirwo aiitwa mari pasi pechirongwa cheCommand Agriculture.
Vati svondo rinoouya komiti yavo ichabvunzurudzawo makambani ese aishanda nehurumende pachirongwa cheCommand Agriculture.
Mamwe makambani achabvunzurudzwa anosanganisira, Pedstock Investments, Croco Motors, FSG pamwe neSakunda inova kambani yechimwe chipangamazano chemutungamiriri wenyika, VaKudakwashe Tagwirei.
Zvichakadaro imwe kambani yakabhadharwa mari inodarika miriyoni yemadhora eku America nehurumende kuti itenge zvinhu zvakaita semotokari pasi peCommand Agriculture muna 2017, yeSolution Motors, yakaudza komiti iyi kuti ichakwanisa kutenga zvese zvinodiwa nehurumende paCommand Agriculture gore rinouya.
Mukuru wekambani iyi, VaPatrick Siyawamwaya, vaudza komiti iyi kuti kunyange hazvo vaitaririsirwa kunge vatenga zvinhu izvi mukati memasvondo masere havana kukwanisa kuita izvi sezvo mari yekunze ichinetsa munyika.
Asi VaBiti nevamwe vavo varatidza kusafara nekambani iyi vachiti zviri pachena kuti kambani iyi yakabira hurumende uye inofanirwa kusingiswa.
Asi VaSiyawamwaya vakaramba kuti vakadya mari yehurumende vachiti vari kushanda nemamwe makambani ekunze kuti vatenge motokari nezvimwe zvese zviri kudiwa pachibvumirano chavakaita nehurumende.
Paramende iri kuita ongororo yayo zvichitevera ongororo yaAuditor General ya2018 iyo yakaratidza kuti mari dzeCommand Agriculture hadzina kufambiswa zvakanaka.
Komisheni inoona nezvekudzivirirwa kwehuwori, yeZimbabwe Anti- Corruption Commission iri kuongororawo nyaya iyi uye panofungidzirwa kuti mari inosvika mabhiriyoni matatu emadhora ekuAmerica inogona kunge yabhadharwa kuvanhu vasina kuzoita basa.